Football Khabar » कोउटिन्होको अबको गन्तव्य कता ?
कोउटिन्होको अबको गन्तव्य कता ?
एजेन्सी, असार ३
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले क्लब इतिहासकै सर्वाधिक महँगा खरिद खेलाडी फिलिपे कोउटिन्होलाई बेच्ने तयारी गरेको छ । बार्सिलोना युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे फुटबलबाट आउट भएपछि क्लब ब्राजिलियन स्टारको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छैन ।
उसले जारी समर करिब दर्जन खेलाडी बेच्ने तयारी गरेको छ । जसमा १४५ मिलियन पाउन्डका कोउटिन्हो प्राथमिकतामा छन् । सिजन २०१८÷१९ मा ५३ खेलबाट ११ गोल गर्दै २ गोलका लागि असिस्ट गरेका कोउटिन्होको प्रदर्शनबाट बार्सिलोना खुसी छैन ।
बार्सिलोनामा कोउटिन्होको अवस्था बुझेका इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीदेखि लिएर फ्रेन्च क्लब पिएसजी, चेल्सी, म्यानचेस्टर युनाइटेड मुख्य दौडमा छन् । यी तीन क्लबमध्ये पिएसजीले कोउटिन्होलाई मुख्य टार्गेटमा रोखेको छ ।
हालसम्म कोउटिन्हो स्वयंले आफ्नो भविष्यबारे केही बोलेका छैनन् । उनी हाल कोपा अमेरिका खेल्न राष्ट्रिय टिममा सहभागी छन् ।
बार्सिलोनाले एक स्टार फरवार्ड भित्र्याउन कोउटिन्होको मूल्य घटेर भए पनि बेच्ने तयारी गरेको बताइएको छ । उसले १०० मिलियन पाउन्डमा आफ्ना महँगा खेलाडी बेचेर नयाँ सिजनमा नयाँ तयारी गर्ने योजना बनाएको स्पेनिस मिडियाले जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति ३ असार २०७६, मंगलवार ०५:०३
प्रिमियर लिगमा आज टोटनह्याम र चेल्सीको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदै
‘बेस्ट फर्म’मा फर्किएका ग्रीजम्यानले प्रशिक्षक र कप्तानलाई दिए यस्तो सन्देश
कोपा इटालिया सेमिफाइनल : नापोली र एटलान्टा रोकिए